Akhriso: Faa’idooyink Caafimaad Ee Kujira Geedka Baamiyaha?.. | Berberatoday.com
Akhriso: Faa’idooyink Caafimaad Ee Kujira Geedka Baamiyaha?..
Hargeysa(Berberatoday.com)-Waxaan maanta qoraalkeena diirada ku saareysnaa faa’dada uu leeyahay cunista geedka loo yaqaano baamiyaha si weyn dalkeena looga isticmaalo.
Geedka Baamiyaha wuxuu leeyahay dheecaan jiidjiidmyo wuxuuna ka mid yahay geedo daaweedyada cilmibaadhista lagu sameeyay, wuxuuna leeyahay faa’idooyinkaan soo socdo:
Geedka Baamiyaha wuxuu ugu horeeya geedaha lagu daweeyo Xanuunka Macaanka (Sokorta),Cilmi baarayaal ayaa xooga saaray sid looga sargaaro sida geedkaan u daweeyo macaanka ama xanuunka loo yaqaano sokorta.
Kolestaroolka: Baamiyuhu wuxuu kaloo yareeyaa dufanka dhiigga ee loo yaqaano “Kolestaroolka” iyo xaydhta fadhiisato jidhka qeybihiisa kala duwan sida beerka oo iyadane loo yaqaano “Triglyceride”, waana arrin cilmibaadhis lagu arkay.
Xididada xannibmo: Baamiyaha waxaa ka buuxo fitamiin C, kan oo ka hortago inuu dhaawac gaaro unguyada jidhka khaasatan xididada.
Lafo-xanuunka iyo Riixa:Waxaa la aaminsanaan jiray in baamiyaha uusan xidhiidh la lahayn xanuunada kalagoysyada ku dhaco markii la baadhay kadib, laakiin waxaa la ogaaday in markii la uumiyo baamiyaha inay dhasho maado loo yaqaano “Silicate” oo u roon kalagoysyo xanuunka.
Kuma koobna inta aan ku ku soo xusnay kaliya inta xanuun uu dawo u yahay Baamiyaha ee waa badan yihiin halaga faa,iidaysto.